आईतबार ३० कार्तिक, २०७७
काठमाडौ । केही सत्य खुल्दा बैज्ञानिकहरु समेत हैरान हुन्छन् । ब्रमाण्डमा असंख्य जीव जन्तुहरु छन् तिनिहरुको विशेषता थाहा पाउँदा दुनियाँ नै चकित हुने गर्दछन् । हालै वैज्ञानिकहरुले छेपारोको एउटा अनौठो प्रजाति पत्ता लगाएका छन् । सर्पजस्तै जिउडाल रहेको यो छेपारो अहिलेसम्म फेला परेको मध्ये एउटामात्र यस्तो प्रजाति हो जुन एकै पटकमा दुबै प्रकारले प्रजनन गर्न सक्षम छ ।
अर्थात् यो छेपारोले एकसाथ बच्चा पनि जन्माउन सक्दछ र अण्डा पनि पार्न सक्दछ । जिव वैज्ञानिककाअनुसार साइफोन इक्वालिस प्रजातिको छेपारोले मौसम अनुसार अण्डा पार्न र बच्चा जन्माउन दुबैका लागि सक्षम हुन्छ । यो थाहा पाउँदा बैज्ञानिकहरु समेत हैरान भएका छन् ।
तर हाल पत्ता लागेको सोही वर्गको यो नयाँ प्रजातिको छेपारोले भने एकसाथ अण्डा र बच्चा दुबै जन्माउने गरेको छ । अष्ट्रेलियको सिड्नी विश्वविद्यालयका जिव वैज्ञानिकहरुले यो छेपारोको अनुसन्धान गरेका छन् । यो छेपारो द्विरुपी प्रजननमा सक्षम रहेको उनीहरुले पत्ता लगाए ।
वैज्ञानिककाअनुसार प्राकृतिक छनोटका आधारमा यो छेपारोमा यस्तो क्षमता विकाश भएको हो । कतिपय वातावरणीय अवस्थामा जिवहरुका लागि बच्चा जन्माउनुको तुलनामा अण्डा पार्नु आफू जिवित रहनका लागि सहज हुन्छ ।
यसअघि साइफोन इक्वालिस प्रजातिका तिन औँले छेपारोले भिन्नभिन्न मौसममा भिन्नभिन्न तरिकाको प्रजनन विधि अपनाउने गरेको पत्ता लागेको थियो । सो प्रजातिको छेपारोले गर्मी ठाउँमा अण्डा पार्ने र चिसो क्षेत्रमा बच्चा जन्माउने गर्दछन् । तर पछिल्लो पटक पत्ता लागेको छेपारोले चाहीँ एकैपटकमा एकैठाउँ अण्डा र बच्चा दुबै जन्माउने गर्दछ । एजेन्सीको सहयोगमा
सामूहिक धार्मिक भोजपछि सबैले रगत बान्ता गर्न थाले, देउता रिसाएको भन्दा-भन्दै गाउँनै सिकिस्त
सरकारी जागिरे केटाको विवाह : बेहुली ५.५ फिट उचाईकी, बेहुला १० बर्ष जेठा मात्र ३ फिटका !
मानिसले सोच्ने वित्तिकै बच्चा बृद्ध-बृद्ध बच्चा हुने, चाहेको स्थानमा पुग्ने टाईम मेसिन बन्यो ?
विश्वभर अहिले देखिएको एक अनौठो दृश्यले सबैलाई हैरान, अर्को ग्रहका मानिस आएको अनुमान
पृथ्वीमा देखिएको एक अनौठो धातु अचानक गायब भएपछि बैज्ञानिकहरु हैरान !
पृथ्वीका लागि सन् २०२० विनाशको बर्ष, २९ नोभेम्बरमा पृथ्वीमा उल्का पिण्ड गुज्रिने खुलासा
फेसबुकमा लभ परेपछि ६० बर्षीया महिला श्रीमान, नाति-नातिना छोडेर २० बर्षका युवकसँग पोइल गइन्
सुन्दा मात्रै पनि अच्चम : मृत श्रीमतीको लाशसँग ६ घण्टा लगातार सम्बन्ध !